Landa i-食べログ お店探し・予約アプリ - ランキングとグルメな人の口コミから飲食店検索 apk yakamuva yakamuva App yi-Kakaku.com, Inc. yamadivayisi we-android - ApkPr.Com
Ikhasi Lasekhaya izinhlelo zokusebenza Ukudla Neziphuzo 食べログ お店探し・予約アプリ - ランキングとグルメな人の口コミから飲食店検索
Kakaku.com, Inc. May 27, 2020
Uhlelo lokusebenza lwe-gourmet kulabo abangafuni ukwehluleka ekukhetheni isitolo. Ukubhukha online nakho kulula. Ungabheka izindawo zokudlela ezimnandi namalantshi asuselwa kwizilinganiso zomsebenzisi nangokubuyekezwa kwabantu abaphephile.
No.1 inombolo yezitolo / izithombe ze-log No.1 !! * Njengoba ungasithola ngokushesha isitolo esingenamuntu, ungaqedela ilogi elilodwa lokudla kusuka ekufuneni indawo yokudlela kuya ekubhukeni.
Uma wenza ukubhuka okuku-inthanethi ngohlelo lokusebenza, uzothola amaphuzu amabili!
* Inhlolovo ka-Okthoba 2018 yinkampani yethu [Ukulanda okungaphezulu kwezigidi eziyi-10!
] Ukubuyekezwa okungaphezulu kwezigidi ezingama-27 kusuka ezindaweni zokudlela ezingaphezu kuka-800,000 ezweni lonke, kufaka phakathi isidlo sasemini, i-ramen, i-yakiniku, i-sushi, izakaya, namaswidi, konke kumahhala.
Amalungu e-premium angabheka kahle isimo se-gourmet yakamuva.
■ Elula ezimweni ezinje
Ngifuna ukuya esitolo se-ramen noma esitolo samaswidi wonke umuntu angazi okwamanjeNgifuna ukuthola izakaya engingayibeka manje ngisho nangoLwesihlanu
Ngifuna i-tavern engingayisebenzisa-ngifuna ukuhlanganyela isipiliyoni sami sokudla nesiphuzo nabangane bami-ngifuna ukwenza uhlu ukuze ngikwazi ukukhumbula izitolo engizikhathalelayo, ngifuna ukwenza inothi-ngifuna ukubhuka isitolo kalula kwi-smartphone yami ■
Amaphoyinti ayisishiyagalombili lapho kukhethwe khona uhlelo lokusebenza lwe-Tabelog
-Uzokutholela isitolo esiphelele.
Ukubuyekezwa kwezigidi ezingama-27!
-Ungabona konke ukuvela kwangempela mahhala.
3. Cishe bangu-2,5 million ababhalisile ababhalisile ezweni lonke!
-Uzothola isibuyekezo esifanela ukunambitheka kwakho.
4. Iphelele ekutholeni izitolo kumephu kusuka endaweni yakho yamanje!
-Bonisa indawo yakho yamanje nendawo oya kuyo kumephu enkulu.
5. Yenza ukubhuka online ezitolo zakho ozithandayo khona lapho!
-Thola izinsuku ezitholakalayo zezitolo nezitolo ezithandwayo ezivela kulwazi lwesihlalo olutholakalayo.
-Ukubhuka kungenziwa ngompompi owodwa, kanye nokubhuka online.
6. Gcina izitolo zakho ozithandayo njengohlu!
-Ungadala uhlu lwakho lwesitolo ngokumane ubhalise esitolo ngenkinombo "Gcina".
7. Zizwe ukhululekile ukwabelana ngesipiliyoni sakho sokudla nesiphuzo!
-Ungabelana kalula ngemizwa yakho "yobumnandi" nabangani bakho be-gourmet.
8. Sebenzisa inkonzo ye-premium ukuyenza ilunge kakhudlwana futhi ibe yinzuzo!
-Sesha izindawo zokudlela nezindawo zokudlela ngokulandelana kwezikhundla.
Ungasebenzisa futhi amakhuphoni ashibhile kunokujwayelekile.
(Kudingeka ukubhaliswa kwe-premium yobulungu) ■ Mayelana ne-Tabelog Premium Service ■ Ukuze usebenzise ukusesha okulungiselelwe kuhlelo lokusebenza, kufanele ubhalisele i-Tabelog Premium Service (i-400 yen tax ifakiwe ngenyanga).
Ngemininingwane yensizakalo, sicela uhlole kusuka kuhlelo lokusebenza.
Imigomo Yobumfihlo http://corporate.kakaku.com/privacy Imigomo Yesevisi http://user-help.tabelog.com/rules/ Kunconywe osandroid 5.0 noma ngaphezulu
Ngincomela Izinhlelo Zokusebenza
All In On Food Ordering App - 50+ Food Apps
Sandwich Maker Cooking Mania
Unicorn Cupcake Dessert Bakery Food Games
Unicorn Milkshake Games And Icy Food Maker